बेसार र नरिवलको तेल प्रयोग गरी सजिलै हटाउनुहोस् अनुहारको पुरै दाग ! [तरिका सहित] – Post Patrika
जिम नगई सिक्स प्याक बनाउन चाहनुहुन्छ ? डाइटमा सामेल गर्नुहोस् मात्र यी चीज
टिकटकमा यस्तो हर्क’त गरे पछि यी युवतीको भिडियो भयो भाइरल [हेर्नुहोस भिडियो]
यस्ता व्यक्ति हुन्छन् मिर्गौला रोगको सबैभन्दा बढी जोखिममा
मुख्य पृष्ठ /Intresting/बेसार र नरिवलको तेल प्रयोग गरी सजिलै हटाउनुहोस् अनुहारको पुरै दाग ! [तरिका सहित]
एजेन्सी – अनुहारको दागधब्बालाई एकै रातमा हटाउने निकै सजिलो प्राकृतिक उपायको बारेमा आज हामी तपाईंलाई जानकारी दिन्छौं । यसले तपाईंको अनुहारलाई चम्किलो र सुन्दर बनाउँछ । एकचोटीको प्रयोग मै अनुहारमा पहिले भन्दा निकै नै परिबर्तन आएको तपाइंले देख्न सक्नुहुनेछ
सबैभन्दा पहिला माथिका दुबै सामाग्रीलाई मिसाई बाक्लो मिश्रण बनाउनुहोस् । त्यसपछि थोरै नरिवलको तेललाई राम्ररी मिसाउनुहोस् । यस पेस्टले अनुहारमा मालिश गर्नुहोस् । र २० मिनेटपछि मुख धुनुहोस् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **